QUUS: Arsenal Oo Xaalad Quus Ah Ka Taagay Haysashada Kabtan Aubameyang, Heshiiskii Uu Saxeexayay Oo Uu Ku Gacan Saydhay & Lacagta Ay Real Madrid Kaga Iibin Karaan. - Gool24.Net
Arsenal ayaa xaalad gabi ahaanba quus ah ka taagan sii haysashada kabtanka kooxdeeda ee Pierre Emerick Aubameyang kaas oo lala xidhiidhinayo Real Madrid kaddib markii uu diiday heshiis kordhintii ay kooxdiisu ka codsatay.
Kahor kulanka ay caawa la yeelanayaan West Ham United, Auba ayaa gabi ahaanba diiday inuu sii wado wada xaajoodka heshiis kordhinta kaddib sagaal kulan oo aysan wax guul ah soo gaadhay kooxdiisu.
Weeraryahanka ree Gabon ayaan wax qarsoon ka dhigin rabitaankiisa u ciyaarista kooxda lala xidhiidhinayo ee Real Madrid isaga oo xilli hore oo xirfadiisa ciyaareed ah sheegay inuu awoowgii ka balan-qaaday inuu Los Blancos wakhti uun u ciyaari doono.
Wargeyska The Sun ayaa sheegaya in suuroganimada uu Aubameyang ugu wareegayo Real Madrid ay noqotay mid kor u kacday kaddib markii uu xiddigani ku wareeray dhibaatada koobab u tartan la’aaneed ee Gunners haysata.
Heshiiskii uu 30 sano jirkani u saxeexa Gunners markii uu laba sano kahor kaga soo biirayay dhinaca Borussua Dortmund ee 60-ka Milyan ku qabsoomay ayay haatan 18 bilood oo kaliyi uga hadheen.
Weeraryahankii hore ee kooxaha AC Milan iyo Saint-Etienne ayaa 57 kulan oo uu Arsenal usoo ciyaaray 42 gool ugu soo dhaliyay taas oo qasabtay inay xiiso u muujiyaan safafna usoo galaan kooxaha ugu muruqa weyn Yurub.
Arsenal ayaa la sheegayaa inay qiimayn doonto heshiis ay ku iibinayso Aubameyang haddiiba ay hesho dalabaad ay lacagtoodu gaadhsiisan tahay intii ay hore ugu soo iibsatay laba sano kahor ee 60-ka Milyan ahayd.